ट्राफिक नियम उल्लघंन बढेपछि पृथ्वीमा झरे ‘यमराज’ – Todays Nepal
ट्राफिक नियम उल्लघंन बढेपछि पृथ्वीमा झरे ‘यमराज’
भारतमा सवारी नियम उल्लघंनका घटना बढिरहेका छन्। ट्राफिक प्रहरीले दण्ड जरिवाना गरेपनि ट्राफिक नियम उल्लघंनका घटनामा कमी आएको छैन्। ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्नेमा युवा बर्ग अगाडि देखिएको छ। के गर्दा ट्राफिक नियम उल्लघंनका घटनामा कमी आउँछ? यस्तोमा मृत्युका देवता ‘यमराज’ नै पृथ्वी लोकमा आएर ट्राफिक नियम पालना गर्न सम्झाएमात्र हामी सबैका आँखा खुल्छन की !
तपाइँ सोचिरहनु भएको होला यो कसरी संभव हुन्छ? आज हामी तपाइँलाई यस बारेमा जानकारी दिँदैछौं। भारतको कर्नाटकको टाउन हलमा ‘यमराज’ को रुप धारण गरेर एक व्यक्ति आए र सबैलाई ट्राफिक नियमका विषयमा जानकारी दिन थाले। उनले यदि कसैले ट्राफिक नियम पालना नगरे दण्ड दिने चेतावनी पनि दिए।
भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार हलासुरु गेट यातायात प्रहरीले मानिसमा यातायात नियमको चेतना फैलाउनकालागि ‘यमराज’ लाई आफ्नो ब्राण्ड एम्बेसडर बनाएको छ।
उनीहरुले हेलमेट नगलाइ बाइक चलाउनु कति खतरनाक हुन्छ भनेर सम्झाउनलाई यस्तो उपाय अपनाइएको हो। बेंगलुरुमा जुलाईलाई सडक सुरक्षा महिनाका रुपमा मनाइन्छ। यातायात नियमका विषयमा जानरुकता फैलाउनकालागि यहाँको प्रहरीले ‘यम’ को भूमिकालाई सडकमा उतारेको हो।
ब्रेकिङ : राजा ज्ञानेन्द्रले दिए ओलिलाइ ठुलो झट्का…
नेपालकै होची गायिका जसको स्वरमा छ यस्तो जादु (भिडियो)